तीजको पार्टीबाट घर हिँडेकी पोखरा पामेकी माया चार दिनपछि मृत फेला – BIG FM 101.2 MHz
Home » स्थानीय » तीजको पार्टीबाट घर हिँडेकी पोखरा पामेकी माया चार दिनपछि मृत फेला
तीजको पार्टीबाट घर हिँडेकी पोखरा पामेकी माया चार दिनपछि मृत फेला
पोखरा । पोखरा १७ रातो पहिरोमा २५ बर्षीया युवती मृत फेला परेकी छिन् । पोखरा महानगरपालिका २४ पामे घर भई पोखरा – ६ जरेवरमा डेरा गरी बस्दै आएकी माया बोधी लामा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले जानकारी दिए ।
गत २५ गतेदेखि बेपत्ता भएकी लामा रातो पहिराको कुलोमा विहीबार मृत भेटिएकी हुन् । एक स्थानीयका अनुसार उनी हल्लनचोक स्थित पोखरा भिलेजमा आयोजना गरिएको पार्टीबाट साँझ साढे ७ बजे निस्किएकी थिईन् । लामा हेल्पिङ ह्याण्ड स्पामा काम गर्ने गरेको ति स्थानीयको भनाई छ ।
घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
पर्वतमा शव फेला
कुश्मा नगरपालिका १ शहस्रधारा नजिकै कालिगण्डकी नदीको किनारमा हालसम्म नाम, थर, वतन नखुलेको अन्दाजी ४० वर्षीया महिलाको शव फेला परेको छ ।
महिलाको शव रहेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ तत्कालै प्रहरी टोली खटिई गई घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नागढुंगा ओरालोमा मोटरसाईकलले ठक्कर दिँदा एक घाईते
पोखरा ८ नागढुंगाको ओरालोमा मोटरसाईकलले ठक्कर दिँदा १ जना घाईते भएका छन् । नम्बर नखुलेको मोटरसाईकलको ठक्करबाट पैदलयात्रा गरिरहेका १८ बर्षिय लक्ष्मण श्रेष्ठलाइ ठक्कर दिएको हो ।
उनको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने मोटरसाईकलको खोजी भइरहेको छ ।
स्याङ्जामा सवारी दुर्घटनामा ५ जना घाईते
स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका ७ काफलबुटा भन्ने स्थानमा बेसिगाउँबाट तनहुँको दुलेगौडातर्फ जाँदै गरेको ग१ज ५०५२ नं. को जिप सडकबाट अन्दाजी १० मिटर तल खस्न जाँदा जिपमा सवार चालक सहित ६ जना मध्ये ५ जना घाइते भएका छन् ।
घाईते हुनेहरुमा पुतलिबजार नगरपालिका ७ कि १२ वर्षीया रितु के.सि., चन्द्र कु.गुरुङ, कविता गुरुङ, वर्ष ४३ को हुम ब. गुरुङ र ३८ वर्षीया रुपा गुरुङ रहेका छन् । घाईते भएका सबै जनाको जिल्ला अस्पताल स्याङ्जामा उपचार भइरहेको छ ।